फेरि एकता हुदै अध्यक्ष प्रचण्ड डा. बाबुराम र विप्लव समूह गोप्प्य वैठकमा जुट्दै । – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/फेरि एकता हुदै अध्यक्ष प्रचण्ड डा. बाबुराम र विप्लव समूह गोप्प्य वैठकमा जुट्दै ।
काठमाडौं – नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पुर्व माओवादीका नेताहरुबीच फेरि एकै ठाउँ बस्ने अवस्था आउने दिशातिर अघि बढेको बताएका छन् । एक टेलिभिजनलाई बुधबार अन्तर्वार्ता दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले मोहनबैद्य किरण डा. बाबुराम भट्टराई र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव लगायतका नेताहरु फुटेर राम्रो नभएको भन्ने निष्कर्षमा पुगेको आफूले पाएको बताए । किरणजी बाबुरामजी र विप्लवजी जहाँ -जहाँ भएपनि हामी एउटै स्कूलका हौं प्रचण्डले भने अहिलेको परिस्थिति जे बनेको छ, मलाई लाग्छ, उहाँहरु पनि चिन्तित हुनुहुन्छ र अब फेरि एकचोटी समय आउन खोजेको देख्छु म । हामीले विभाजित भएर गल्ती पो गर्यौं क्यारे ।
यसले प्राप्त उपलब्धि पनि जोखिममा पर्ने पो होकि भन्ने चिन्ता जति मलाई छ बिस्तारै किरणजीलाई बाबुरामजीलाई र विप्लव जी लगायत अरु सथाीहरुलाई बढ्दै गएको छ भन्ने मलाई लाग्छ । यद्यपी मेरो विप्लवजीसँग कुराकानी पनि छैन । बाबुराम र किरणजीसँग बेला बेला कुरा हुन्छ । त्यो कुराबाट मैले महसुस गर्ने सबैलाई हामी विभिाजित हुनु सही होइन भन्ने निष्कर्षतिर देशको परिस्थितिले डोर्‍याइराखेको छ ।
आफूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि पार्टीलाई झण्डै दुईतिहाईको बहुमतको दिशामा पुर्‍याएको प्रचण्डले दाबी गरे । माओवादी आन्दोलनपछि विभाजन भएको पार्टीलाई शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्ने एउटा आर्किटेक्चरको भूमिका खेल्ने अवसर पाएँ भन्ने छ मलाई प्रचण्डले भने । माओवादी पार्टीभित्र विभाजन आएपनि आफूलाई कुनै चिन्ता नलागेको प्रचण्डले बताए । म चिन्तित भएर बरबाद भएँ भन्ने मलाई लागेकै छैन उनले थपे । तत्कालीन एकीकृत माओवादीबाट बैद्य भट्टराई र विप्लव बाहिरिएका थिए । source: praharnews